Wasiiradii dalka Itoobya oo isku shaadheyn lagu sameeyey (Akhriso ). | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Wasiiradii dalka Itoobya oo isku shaadheyn lagu sameeyey (Akhriso ).
Wasiiradii dalka Itoobya oo isku shaadheyn lagu sameeyey (Akhriso ).
Baarlamaanka dalka Itoobiya, ayaa meel-mariyay Wasiirada Cusub ee Itoobiya oo RW Hailemariam uu isku shaandheynta ku sameeyay, Wasirradan oo magacaabidooda ay imaanayso iyadoo waddankaas dhawaan la geliyay xaalad Deg-deg ah.
Ugu dambeyn, Waxaa xusid mudan in Wasiirradan Cusub ay ku jiraan xubno Soomaali ah, kuwaasoo loo magacaaay Wasaarado muhim ah, iyadoo Golaha cusub ee Wasiirrada ay ka mid yihiin; xubno ka tirsan Axsaabta Mucaaradka Itoobiya.
Previous articleXarunta galmudug ee Cadaado oo Amnigeeda ay la wareegeen Ciidamo ka tirsan Amisom.
Next articleQodobada heshiis horu dhac ah oo ay gaareen maamulada Puntland iyo Galmudug.